काठमाडौं उपत्यकामा ९८ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, यी स्थानमा थपिए नयाँ कोरोना संक्रमित ? – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाडौं उपत्यकामा ९८ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, यी स्थानमा थपिए नयाँ कोरोना संक्रमित ?
काठमाडौं उपत्यकामा ९८ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, यी स्थानमा थपिए नयाँ कोरोना संक्रमित ?
पछिल्लो २४ मा देशभर ४६८ जना कोरोनाभाइरस संक्रमित थपिएका छन् । शनिबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले सो जानकारी दिएका हुन् । संक्रमितमा काठमाडौं उपत्यकाका ९८ जना रहेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा १२४ डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म निको हुनेको संख्या १७ हजार २०१ पुगेको छ ।प्रदेश नम्बर १ मा ११ सय ८, प्रदेश नम्बर २ मा ३ हजार ५ सय ४५, बागमती प्रदेशमा ६ सय ४१ र गण्डकी प्रदेशमा १ हजार ५ सय २५ जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन् । यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा ४ हजार २ सय ८६, कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ९ सय ३३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा४ हजार १ सय ६३ जना गरी आजसम्म कोरोनामुक्त हुनेको संख्या १७ हजार २ सय १ पुगेको हो ।
आज आइसोलेसनमा ८ सय १ सय ९३ जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन् । प्रदेश नम्बर १ मा ८ सय ५४, प्रदेश नम्बर २ मा ३ हजार ८ सय २७, बागमती प्रदेशमा २ हजार २ र गण्डकी प्रदेशमा २ सय ६२ जना संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन ्। यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा ७ सय ३६, कर्णाली प्रदेशमा २ सय २५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८ सय १० जना आइसोलेसनमा रहेका छन् । आज ५ सय २३ जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेको गौतमले बताए । आज आइसियुमा ९८ र भेन्टिलेटरमा ४ जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन् ।
आज क्वारेन्टिनमा १४ हजार ४ सय ४८ जना रहेका छन् । प्रदेश नम्बर १ मा २ हजार ७ सय १३, प्रदेश नम्बर २ मा १ हजार ७ सय, बागमती प्रदेशमा १ हजार ६४ र गण्डकी प्रदेशमा २ हजार ९ सय ८३ जना रहेका छन । यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा २ हजार ७३, कर्णाली प्रदेशमा ७ सय ६० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ हजार १ सय ५५ जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् ।मन्त्रालयले संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुलाई ५ दिनपछि मात्रै कोरोना परीक्षण गर्न आग्रह गरेको छ । संक्रमण पोजेटिभ भएको व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुले तत्कालै परीक्षणका लागि स्वाव दिने गरेको पाइएको भन्दै प्रवक्ता गौतमले तत्कालै परीक्षण गर्दा नतिजा नेगेटिभ आएपनि सिट कोरोना पोजेटिभ हुने सम्भावना बढी रहने बताए ।
हट्यो अन्योलता, भोलिदेखि मोटरसाइकलमा जोर-बिजोर लागू
छोराको शरिर कु’हियो सक्यो, आमाले बोकेर उप’चारकाे लागी सडकमा सहयोग उठाउँदै, एक द’र्दनाक भिडियो